राष्ट्रिय जनमोर्चाका वार्ड भेलाहरु सम्पन्न
बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर ८ मधुवन कपिलवस्तुमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको वार्ड भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले टङ्क जी.सी. को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय बाणगËा नगर समिति गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी भुसाल , सचिवमा कमला पौडेल, सह–सचिवमा गिर बहादुर के.सी. र कोषाध्यक्षमा हिमलाल न्यौपाने रहनुभएको छ । त्यस्तै सदस्यहरूमा प्रेमकला खत्री, सन्त बहादुर जी.सी., तिल बहादुर जी.सी., टेकपति सापकोटा, टिकाराम पौडेल र लाल बहादुर के.सी. रहनुभएको छ । त्यसैगरी सल्लाहकारहरूमा डवल सिंह जी.सी. र ऋषिराम शर्मालाई चयन गरिएको छ ।
भेला डवल सिंह जी.सी. को अध्यक्षता हिमलाल न्योपानेको स्वागत र टङ्क जी.सी. को सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । भेला अखिल नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शिव पौडेल र ने.क.पा. मसाल जिल्ला प्रवक्ता छबिलाल गैरेको बिशेष उपस्तिथिमा सम्पन्न भएको थियो ।
गँगदीको वार्ड भेला
राष्ट्रिय जनमोर्चा एरिया नं. १ अन्तर्गत राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ गङ्गदी, भालुवाङको २०७३ चैत्र २८ गते सम्पन्न भेलाले सुरेन्द्र कुमार रोकाको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय वडा समिति गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा लुद्र बहादुर बुढा, कोषाध्यक्षमा खिर्मादेवी घर्ती, सचिवमा बाबुराम कवर मगर र सहसचिवमा टोप बहादुर घर्ती रहनु भएको छ । त्यसै गरी सदस्यहरूमा हरि बहादुर घर्ती, वीर बहादुर विक, लली सार्की र रेशम बहादुर बुढा मगर रहनु भएको छ ।
भेलाले अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार रोकाको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय निर्वाचन प्रचार प्रसार उपसमिति समेत गठन गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य गणेश नेपालीको अध्यक्षतामा भएको भेलाको उद्घाटन राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला सचिवालय सदस्य महेश रिजालले गर्नु भएको थियो । भेलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चा राजपुर गाउँ समन्वय समितिका उपाध्यक्ष एक बहादुर घर्ती, जातीय समता समाज राजपुर गाउँ समितिका सल्लाहकार राज कुमार विश्वकर्मा लगायतले मन्तव्य दिनु भएको थियो । भेलामा नेकपा माओवादी–केन्द्र, नेकपा (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी ६३ जना कार्यकर्ताहरू राजमोमा प्रवेश गरेका थिए । नवप्रवेशी कार्यकर्ताहरूलाई प्रमुख अतिथि तथा जिल्ला सचिवालय सदस्य महेश रिजालले स्वागत तथा सम्मान गर्नु भएको थियो ।